what's wrong with gtalk offline message??? — MYSTERY ZILLION
what's wrong with gtalk offline message???
April 2009 edited June 2009 in Other
တစ်နေ့က ကျွန်တော့်ကိုသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ဆီကို gtalk offline mess: send သွားတယ် ၊ အတိအကျပြောရရင် ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့(April 9)မနက်ပိုင်းကပါ(offline mess: ကိုကြည့်ပြီးဘယ်အချိန်က send သွားလဲဆိုတာကိုပြောတာပါ) ၊ ကျွန်တော်လည်း gtalk ကို အချိန်ပြည့်လိုလိုသုံးပါတယ် ။ သူsend သွားပြီးသိပ်မကြာဘူး၊ကျွန်တော် galk ကိုသုံးပါတယ် ၊တစ်နေကုန်gtalkကိုဖွင့်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒီmess:ကပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့လောက်ကမ
ှရောက်လာတယ်(ရက်အတိအကျမမှတ်မိပါ)။ နောက်တစ်ခု ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့က ကျွန်တော့်ဆီကို send တဲ့ mess: တစ်ခုကလည်း အင်္ဂါနေ့ကျမ ရောက်လာတယ် ( တနင်္လာရော အင်္ဂါရော gtalk သုံးခဲ့ပါတယ်) ။ gtalk mess: ကို schedule နဲ့၊ ဘယ်နေ့ ၊ ဘယ်အချိန်မှာ send ပါဆိုတဲ့ feature မျိုးတော့ google ကမရသေးဘူးထင်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်ပဲမသိတာလားတော့မသိဘူး ။:) ။မြန်မာနိူင်ငံကွန်နက်ရှင်နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ် ။ ဘာလို့လဲ့ဆိုတော့ ဒုတိယတစ်ယောက်က မြန်မာနိူင်ငံပြင်ပ ကနေ send တာပါ ။ သူ့ဆီမှာလည်းအဲလိုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် ၊ သူ့ဆီကိုရောက်တဲ့ mess: ကကျတော့ (5)ရက်လောက်ကြာတယ်လို့ပြောတယ် ။ သူ့ဆီကိုတော့ တစ်ခြားတစ်ယောက်က send တာပါ ။ ဘယ်ဖြစ်တာလဲမသိ.......???:106::106::106: ? ကြုံဖူးကြလားမသိဘူး ။ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးကြပါအုံး ။
gtalk mess: ကို schedule နဲ့၊ ဘယ်နေ့ ၊ ဘယ်အချိန်မှာ send ပါဆိုတဲ့ feature မျိုးတော့ google ကမရသေးဘူးထင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်လဲကြားမိဘူးဗျ..google က undo send ကိုပဲ လုပ်ပေးသေးတာပါ...ကျွန်တော်တို့သုံးတာတော့ရတာပဲ..ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့က တက်ချိန်မတူတော့ offline mess ကိိုပဲအားကိုးရတာလေ...သိသူများ၀င်ပြောပေးကြပါ...
ကျွန်တော်တော့ ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်ထင်တာပဲ။ ဟိုတစ်လောက မြန်မာပြည်ကွန်နက်ရှင်တွေမကောင်း
တုန်း ပို့တဲ့ offline msg တွေက ကျွန်တော်ဆီကို တစ်ရက်ကျော်ကျော်လောက်နောက်ကျပြီးမှ
ရောက်တယ်။ မေးလ်ကတော့ ပုံမှန်ပဲရောက်ပါတယ်။ gtalk နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီအတောအတွင်း
အဲဒီလိုပြောမှာစိုးလို့ ...မြန်မာကမဟုတ်တဲ့ mess: တွေလည်းအကုန်နောက်ကျပါတယ်လို့ပြောထားတာပေါ့
......မြန်မာနိူင်ငံပြင် ပအချင်းချင်းကို အဲဒီလိုဖြစ်နေတာပါ။တစ်ခါတည်းဖြစ်ရုံနဲ့ ဒီပိုစ့်ကိုတင်တာမဟုတ်ပါ
ဘူး သူငယ်ချင်းရ ။:)
ပထမ တစ်ခေါက်က ၂ ရက်ကြာတယ်ဗျ။
ဒုတိယတစ်ခေါက်က ၁ ရက်ကြာတယ်။
ကျွန်တော်လဲ အဲ့ဒါပထမတစ်ခေါက်ထဲက သတိထားမိတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ ဖြစ်တတ်တာမျိုးပဲထင်တာနဲ့ ဒီတိုင်းထားလိုက်တာ။
ဒုတိယ တစ်ခေါက်ကျတော့ တော်တော်လေးခေါင်းစားသွားတယ်။
သေခြာတာကတော့ အရင်ကဒါမျိုးမဖြစ်ဖူးဘူး။ Connection တွေကျပြီးတဲ့ရက်ပိုင်းမှဖြစ်တာဆိုတော့ Connection ကြောင့်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့။
အေးဗျာ .. အစ်ကိုပြောသလိုဘဲ ကျွန်တော်လည်း ဖြစ်တယ် ..
ချစ်ချစ်ကို offline messages လေးတွေ ပို့ထားတာ မရောက်လို့ စိတ်ကောက်နေပါရောလား
နောက်တစ်နေ့ကျမှ သူဖတ်မိပြီးမှ စိတ်ဆိုးပြေသွားတာ ..
ဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲဆိုတာကိုသိတဲ့သူများ ရှင်းပြပေးကြပါဦး ။
MZ ထဲရောက်ကတည်းက မေးခွန်းတွေကြီး လှိမ့်မေးနေရလို့ အားတော့ နာပါရဲ့။
မတတ်နိုင်ဘူးလေ .. ကိုယ်က သိတာတွေနည်းပြီး မသိတာတွေများနေတော့ ခွင့်လွှတ်ကြဦးဗျိူ့။
ဒါနဲ့ ဒီဖိုရမ်မှာ ကျေးဇူးခလုပ်ကို သိပ်မနှိပ်ကြသလိုဘဲ ..
mail ကတော့ မသိဘူးဗျာ ... ကျနော့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ဖုန်းထဲကိုတော့ SMS message တွေ နှစ်လလောက်နောက်ကျပြီးမှ ရောက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ကျနော်တော့ ၃ရက်လောက်မှ ရောက်လာတဲ့ SMS တွေနဲ့တော့ ကြုံဖူးတယ် ... :P
အဲဒါ ကျနော်ထင်တာတော့ ကွန်ကြောင့်ပဲလို့
အခုတော့ Gtalk မှာ File Transfre ပြန်ရနေပီဗျ
အဲ... offline message တွေတင်မကဘူး creativefoxပြောသလိုပဲ
တစ်လကျော်မှရောက်တဲ့ SMS တွေတောင်ရှိနေတာပဲ
ကျနော်ဆိုရင်လုံး၀မရောက်တဲဲ့ SMS တောင်ရှိသေးတယ်
connection ကြောင့်ဆိုတာ.....မြန်မာနိူင်ငံကကွန်နက်ရှင်ကြောင့်လို့ဆိုလိုတာလား ။ အဲဒါဆိုရင် မြန်မာနိူင်ငံ
နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ နိူင်ငံတွေမှာသာဖြစ်ရမှာပေါ့ ။ အခုတော့ မြန်မာနိူင်ငံမဟုတ်တဲ့ ပြင်ပနှစ်နိူင်ငံမှာရှိတဲ့လူ
နှစ်ယောက် send တဲ့ msg တွေမှာပါနောက်ကျနေတာ ဘာကြောင့်လဲ :39::39:......ဒါပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်း တော့မဖြစ်တော့ဘူးဗျ ။ ဟိုတစ်လောကပဲဖြစ်တာပါ။ ဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားကြပါကုန် :D
ဟုတ် post တွေမများချင်လို့ ပေါင်းမေးလိုက်တရ်...
သတိထားမိကြလားသိဖူး...Gtalk ကို invisible လုပ်ပြိး...ပြန် visible လုပ်တယ်ဗျာ...
အဲ့နောက်ပိုင်း Gtalk offline message တွေမရောက်တော့ဘူးဗျ..ဘာလို့ လဲမသိဘူး.....
invisible တစ်ခါမှ မလုပ်ရသေးတဲ့ account မှာဆိုရင်တော့ရတရ်.......(message မရတာ
တစ်ခုတော့ကောင်းသွားတရ် မောင်ကြည့်ရှောင်ဆီက အကြွေးတောင်းတော့သူ messageထားသွား